တရုတ်ဆိုဗီယက် Split ကိုအဘယျသို့ခဲ့သလား
တရုတ်ဆိုဗီယက် Split ကို
အဆိုပါ 1900 ခုနှစ်တွင်ရုရှားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံရေး strain
ဒါဟာ 20 ရာစုရဲ့အနှစျခုအကြီးအများအတွက်သဘာဝကယ့်ပုံပဲ ကွန်မြူနစ် အင်အားကြီး, ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု (ရုရှားနိုင်ငံ) နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကြီးများမဟာမိတ်များဖြစ်, (PRC) ။ သို့သော်ရာစုအများကြီးအဘို့, နှစ်နိုင်ငံတရုတ်ဆိုဗီယက် Split ကိုခေါ်တော်မူသောအရာကိုအတွက်အလေးသာမှာပြင်းစွာနှင့်လူသိရှင်ကြားခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဘာဆက်ဖြစ်သနည်း?
နောက်ဆုံးမှာအုပ်စုခွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့အဲဒီနှစျခုကြီးမားသောလူမျိုး၏အခြေခံသဘောတရားအတွက်သွေးခွဲကို - မာ့က်စ်အောက်မှာရုရှားရဲ့အလုပ်လုပ်လူတန်းစားပုန်ကန်သည့်အခါ 1930 ၏တရုတ်ကလူမနေချိန်တွင်အမှန်ကတော့သည်အုပ်စုခွဲအမှန်တကယ်, စတင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Split ကို၏အမြစ်များ
တရုတ်ဆိုဗီယက် Split ကို၏အခြေခံတကယ်ပြန်၏အရေးအသားများမှသွား ကားလ်မာ့က်စ ပထမဦးဆုံးမာ့က်စ်အဖြစ်လူသိများကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏သီအိုရီကိုဆန့ ်. အဘယ်သူသည်။ မာက်စ်ဝါဒီအယူဝါဒအရ, အရင်းရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေး proletariat ကနေလာလိမ့်မယ် - အကြောင်း, မြို့ပြစက်ရုံလုပ်သားများသည်။ အဆိုပါ 1917 ၏ထိုအချိန်က ရုရှားတော်လှန်ရေး , လူလတ်တန်းစားလက်ဝဲတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကဤသီအိုရီများနှင့်အညီ, သူတို့အမှုကိုဖို့သေးငယ်တဲ့မြို့ပြ proletariat အဖွဲ့ဝင်အချို့ဝိုင်းရံကြဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ် 1930 နှင့် 1940 ခုနှစ်တလျှောက်လုံး, ဆိုဗီယက်အကြံပေးတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာရန်တရုတ်အားတိုက်တွန်းခဲ့သည်။
တရုတ်, သို့သော်သေးတစ်ခုမြို့ပြစက်ရုံအလုပ်သမားလူတန်းစားရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ မော်စီတုန်း ကဒီအကြံပေးချက်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်အစားကျေးလက်နေတောင်သူလယ်သမားများ၏အပေါ်သူ၏တော်လှန်ရေးအခြေခံခဲ့ရသည်။ ကဲ့သို့သောအခြားအာရှလူအမျိုးမျိုးတဲ့အခါမှာ မြောက်ကိုရီးယား , ဗီယက်နမ် နှင့် ကမ္ဘောဒီးယား ကွန်မြူနစ်ဝါဒမှဖွင့်ဖို့စတင်ခဲ့သူတို့မှာလည်းတစ်ခုမြို့ပြ proletariat ရှိကြ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးမော်ဝါဒီလမ်းကြောင်းထက်ဂန္ထဝင်မာက်စ်ဝါဒီ-Leninist အယူဝါဒနောက်တော်သို့လိုက် - ဆိုဗီယက် '' သတိထားရန်။
1953 ခုနှစ်တွင်ဆိုဗီယက်ပရီးမီးယားလိဂ် ယောသပ်သည်စတာလင် ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်း, Nikita ခရူးရှော့ဖ်ဆိုဗီယက်မော်စီတုန်းအတွက်အာဏာရလာသူအများဆုံးအကြီးတန်းကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်ကြောင့်ယခုကိုယ်တော်တိုင်ကနိုင်ငံတကာကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏ဦးခေါငျးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား - တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲနှင့်အတူ ကွန်းဖြူးရှပ်ဝါဒ ချဉ်းကပ်, သံ။ သူကကမ္ဘာ့နှစ်ခုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုခေါင်းနှစ်လုံးကတည်းကရူးရှော့ဖ်, ကထိုလမ်းကိုမမွငျခဲ့သညျ။
ခရူးရှော့ဖ် 1956 ခုနှစ်မှာစတာလင်ရဲ့အလွန်အကျွံရှုတ်ချနှင့် "ကိုစတင်တဲ့အခါမှာ က de-စတာလင် " အဖြစ်အရင်းရှင်ကမ္ဘာနှင့် "ငြိမ်းချမ်းသောအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်" ၏လိုက်စား, နှစ်နိုင်ငံအကြားတွင်းကျယ်လာပြီး။
1958 ခုနှစ်, မော်စီတုန်းတရုတ်တစ်ယူမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ် ဂရိတ် Leap Forward ခရူးရှော့ဖ်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသဘောထားတွေနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖို့ဂန္မာက်စ်ဝါဒီ-Leninist ချဉ်းကပ်ခဲ့သော။ မော်စီတုန်းရဲ့လိုက်စားပါဝင်သည် နျူကလီးယားလက်နက်များ သည်ဤအစီအစဉ်ကိုနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူ့ရဲ့နြူကလီးယားလာပါသည်ဘို့ခရူးရှော့ဖ်ဖိုးမထားဘဲ - သူ PRC ကွန်မြူနစ်စူပါပါဝါအဖြစ်ဆိုဗီယက်၏အရပျကိုယူချင်တယ်။
ဆိုဗီယက်တရုတ်အနုမြူလက်နက်များဖွံ့ဖြိုးကူညီရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ခရူးရှော့ဖ်မော်စီတုန်းဟာအဖုများနှင့်အလားအလာမတည်ငြိမ်ခြင်းအင်အားသုံးစဉ်းစားပေမယ့်တရားဝင်သူတို့မဟာမိတ်နျြရစျ။ အမေရိကန်မှခရူးရှော့ဖ်ရဲ့သံတမန်ရေးချဉ်းကပ်မှုကိုလည်းဆိုဗီယက်မှာအကောင်းဆုံး, တစ်ဦးအလားအလာစိတ်မချရမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ဖို့မော်စီတုန်းဦးဆောင်ခေါ်သွားပါတယ်။
အဆိုပါ Split ကို
တရုတ်ဆိုဗီယက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲမှာအက်ကြောင်းအဆိုပါရုရှားနိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့စဉ်အတွင်းတိဘက်လူတွေကိုကိုယ်ကျင့်တရားထောက်ခံမှုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် 1959 ခုနှစ်လူသိရှင်ကြားပြသနိုင်ဖို့စတင် 1959 လူထုအုံကြွမှု မှာတရုတ်ဆန့်ကျင်။ အဆိုပါအုပ်စုခွဲမော်စီတုန်းနှင့်ခရူးရှော့ဖ်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးထိုစုဝေးကိုယ်စားလှယ်များ၏ရှေ့မှောက်၌အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်မှာကဲ့ရဲ့ပစ်ရှိရာယားကွန်မြူနစ်ပါတီကွန်ဂရက်အစည်းအဝေးမှာ 1960 ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံတကာသတင်းကိုနှိပ်ပါ။
အဆိုပါလက်အိတ်ကိုချွတ်နှင့်အတူ, မော်စီတုန်း 1962 ခုနှစ်ကာလအတွင်းအမေရိကန်ဖို့ capitulating ၏ခရူးရှော့ဖ်စွပ်စွဲ ကျူးဘားဒုံးပျံအကျပ်အတည်း နှင့်ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်မော်စီတုန်းရဲ့မူဝါဒများနျူကလီးယားစစ်ပွဲဆီသို့ဦးတည်မယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ဆိုဗီယက်ထို့နောက်ကျောထောက်နောက်ခံ အိန္ဒိယ 1962 ၏တရုတ်-အိန္ဒိယစစ်ပွဲဖြစ်သည်။
နှစ်ခုကွန်မြူနစ်အင်အားကြီးများအကြားဆက်ဆံရေးလုံးဝပြိုကျခဲ့သည်။ ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏မြင့်တက်စူပါပါဝါကိုဆင်းတာအတွက်အခြားကူညီပေးဖို့ကမ်းလှမ်းနှစ်ခုသည်ယခင်မဟာမိတ်များ၏မနှင့်တကွ, ဆိုဗီယက်, အမေရိကန်များနှင့်တရုတ်အကြားသုံးလမ်းလူကြိုက်များသို့စစ်အေးလှည့်။
တရုတ်ဆိုဗီယက် Split ကို၏ရလဒ်အဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးမှာ 20 ရာစုအဆုံးစွန်သောဝက်ကာလအတွင်းအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုကွန်မြူနစ်အင်အားကြီးနီးပါးအတွက်နယ်စပ်အငြင်းပွားမှု 1968 ခုနှစ်တွင်စစ်ပွဲသို့သှားကွ၏ ကျန်း အနောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဝီဂါဇာတိမြေ။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပင်တရုတ်ဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနျူကလီးယားလက်နက်များစမ်းသပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေရာလည်းကျန်းအတွက် Lop Nur ဝှမ်း, ဆန့်ကျင်နေတဲ့ preemptive သပိတ်ထွက်တင်ဆောင်လာသောဆင်ခြင်၏။
ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်, တကကမ္ဘာကြီးကိုစစ်တစ်စင်းအားကိုကြောက်ရွံ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖျက်ဆီးဖို့မဆိုဗီယက်ဖျောင်းဖျသောအမေရိကန်အစိုးရဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤဒေသတွင်း၌ရုရှတရုတ်ပဋိပက္ခ၏အဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ယင်းသည့်အခါ ဆိုဗီယက်အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုကျူးကျော် အဲဒီမှာသူတို့ရဲ့ client ကိုအစိုးရတက်ကျားကန်ဖို့ 1979 ခုနှစ်တွင်တရုတ်ဆိုဗီယက်ဂြိုဟ်တုပြည်နယ်များနှင့်အတူတရုတ်ဝန်းရံဖို့ရန်လိုအပြောင်းအရွေ့အဖြစ်ဤကိုမြင်တော်မူ၏။ ရလဒ်အနေနဲ့တရုတ်အမေရိကန်နှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုမဟာမိတ် ပါကစ္စတန် ဟာကိုထောကျပံ့ဖို့ မူဂျာဟီဒင် , ကိုအောင်မြင်စွာဆိုဗီယက်ကျူးကျော်မှုဆန့်ကျင်တဲ့သူအာဖဂန်ပြောက်ကျားတိုက်ခိုက်ရေးသမား။
အဆိုပါ alignment ကိုအာဖဂန်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေသောခဲ့သကဲ့သို့, နောက်နှစ်ပြန်လှန်။ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်တစ်စင်းအားအီရန်ကျူးကျော်တဲ့အခါမှာ အီရန်-အီရတ်စစ်ပွဲ 1988 ခုနှစ်မှ 1980 ခုနှစ်, အဲဒါကိုသူ့ကိုကျောထောက်နောက်ခံပြုသူကိုအမေရိကန်, ဆိုဗီယက်နှင့်ပြင်သစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တရုတ်, မြောက်ကိုရီးယားနှင့်လစ်ဗျားအီရန်ကူညီခဲ့။ တိုင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သော်လည်းတရုတ်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဖက်ပေါ်ဆင်းလေ၏။
အဆိုပါနှောင်းပိုင်း 80s နှင့်ခေတ်သစ်ဆက်ဆံရေး
ဘယ်အချိန်မှာ Mikhail Gorbachev က 1985 ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သူတရုတ်နှင့်ဆက်ဆံရေး regularize ငှါရှာကြံလေ၏။ ဂေါ်ဘာချော့ဆိုဗီယက်နှင့်တရုတ်နယ်စပ်ကနေနယ်စပ်အစောင့်အခြို့ကိုပြန်ပြောပြနှင့်ကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးပြန်ဖွင့်။ ဘေဂျင်း၏ဂေါ်ဘာချော့ရဲ့မူဝါဒများသံသယဖြစ်ခဲ့သည် perestroika နှင့် glasnost စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှေ့တော်၌နေရာတစ်နေရာယူသင့်ကြောင်းယုံကြည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေတရုတ်အစိုးရနှောင်းပိုင်းတွင် 1989 ခုနှစ်မေလကဂေါ်ဘာချော့ကနေအရာရှိတဦးကပြည်နယ်ခရီးစဉ်နှင့်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်သံတမန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်စတင်ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုစာနယ်ဇင်းယခုအချိန်တွင်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ပီကင်း၌စုဝေးစေတော်မူ၏။
သတင်းထောက်တွေကိုနှင့်ဒါတီယန်မင်ရင်ပြင်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ချိန်တည်းမှာထွက်ချိုးဖဲ့ - သို့သော်သူတို့အဘို့အ bargained ထက်ပိုတယ် ဓာတ်ပုံဆရာ ကမ္ဘာတဝှမ်းကနေမျက်မြင်များနှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသော တီယန်မင်ရင်ပြင်အသတ်ခံရမှု ။ ရလဒ်အနေနဲ့တရုတ်အရာရှိတွေဆိုဗီယက်ဆိုရှယ်လစ်ကယ်ဖို့ဂေါ်ဘာချော့ရဲ့ကြိုးစားမှု၏ပျက်ကွက်အကြောင်းကို smug ခံစားရရန်ပြည်တွင်းရေးကိစ္စရပ်များကိုအားဖြင့်ဖွယ်ရှိလည်းအာရုံပြံ့လှငျ့ခဲ့သညျ။ 1991 ခုနှစ်တွင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုသည်ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံးကွန်မြူနစ်ပြည်နယ်အဖြစ်တရုတ်နှင့်၎င်း၏ဟိုက်ဘရစ်စနစ်ကထွက်ခွာ, ပြိုကျ။
စတာလင်ရဲ့မရဏ: သူ့လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အကျိုးဆက်များ Escape မဟုတ်ခဲ့ပါ
ကွန်ဆာဗေးတစ်ခရစ်ယာန်များကို vs. လစ်ဘရယ်ဘုရားမဲ့ဝါဒီ
ဆွာဟီလီ Town: အရှေ့အာဖရိက၏အလယ်ခေတ်ထရေးဒင်း Communities
တွေ့ဆုံဂိဒေါင်: ဘုရားသခင်ကနျထမွောကျတစ်ဦးက Doubter
တစ်သင်ခန်းစာအစီအစဉ် Template: များအတွက်ခေါင်းစဉ်များ
အင်တာဗျူး: Hayden Panettiere "ပြိုင်ပွဲအစင်းကျား" ဆွေးနွေး
ထိတ်လန့် Movie, ဇာတ်ကားက Round-Up ကို
"ဟယ်ရီပေါ်တာ" နောက်ကွယ်မှာအဆိုပါရီးရဲလ်-ဘဝက Wizard ကို
ပရင့်ထုတ်ရန်အ Element ကို Crossword ပဟေဠိများနှင့်အဖြေများ
Bowfin အကြောင်း - တစ်ရံဖန်ရံခါနှင့်ထူးဆန်း, Catch
Planet ကိုယူရေးနပ်စ: အနေရောင်ခြည်စနစ်မှတစ်ဆင့်ခရီး
သင်က Homeschooling စာရင်းအင်းများယုံကြည်ကိုးစားဘဲနေရမည်အဘယ်ကြောင့်
အီတလီ Noun: ကျားနှင့်အရေအတွက်